Ikhabhinethi yeLog kufutshane neeNtaba zeMsi eziMkhulu
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguStanley
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uStanley iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-"INAMAL HOUSE CABIN" ikwi LAUREL VALLEY gated community edityaniswe neGreat Smoky Mountains National Park e Townsend, Tennessee. Ikwinduli enemithi enendawo yomthi ngaphambili ejonge intlambo engezantsi.
Sinendlu yokulala ezimbini zokuhlambela zerustic ezirentwayo eTownsend, TN. Ikhabhathi ikwindawo entle, enesango yaseLaurel Valley edibana neGreat Smoky Mountains National park. Kukho indawo yokudlala yegalufa yoluntu kunye nendlu yeklabhu embindini weLaurel Valley Community.
Ikhabhinethi inegumbi lokuhlala elivulekileyo kunye nekhitshi kunye namagumbi amabini okulala. Igumbi lokulala elikhulu elivaliweyo elinebhedi enkulu kwaye likumgangatho ophambili. Igumbi lokulala lesibini ligumbi eliphezulu elivulekileyo elijonge kwiGumbi elikhulu kwaye linebhedi enye epheleleyo kunye nebhedi enye ukumkanikazi kunye negumbi lokuhlambela elidityanisiweyo. Kukho iifestile ezinkulu ezijonge intlambo kunye neendawo zemithi ngaphambili. Ikhabhinethi ine-intanethi / i-WIFI, iTV esetyenziswa yi-eriyali (akukho ntambo), iDVD/VCR, umoya ophakathi wombane kunye nobushushu, indawo yokutshisa iinkuni (asiboneleli ngeenkuni), itafile yepool, kunye netafile yefoosball. Kukho itafile yokubhukuda kwindawo engaphantsi. Ikhabhinethi inemigangatho emibini emikhulu ejonge kwimithi ejikelezileyo kunye nentlambo engaphambili kwaye iziva ingasese kakhulu nangona kukho ezinye iikhabhini ezikufutshane. Ukupaka kulinganiselwe kwiimoto ezi-2 (zipakwe ngononophelo) kunye nomgaqo ogobileyo. Kukho izinyuko ezintathu zokuya kumnyango wangaphambili. Le khabhinethi ayilokhetho lulungileyo ukuba uchasene nokunyuka izinyuko okanye wothuswa ziindlela zentaba; I-driveway ingumnqantsa kwaye zininzi izitepsi eziya kumnyango wangaphambili. Kodwa emva kokunyuka izitebhisi ukuya kumgangatho ophezulu ufumana imvakalelo yokuba kwindlu yomthi. Ndiyakuthanda ukuhlala kwidesika kwaye ndibe phakathi kweencopho zemithi.
I-Townsend ibekwe kumnyango wasentshona we-Great Smoky Mt. National Park e-TN. Kumalunga neekhilomitha ezili-17 ukusuka ePigeon Forge kwaye malunga neekhilomitha ezingama-25 ukusuka eGatlinburg. Umlambo omncinci uphuma ePaki kwaye utyhutyha iTownsend kwaye waziwa ngokuloba, ukukhwela ibhayisekile kunye netyhubhu. Kukho indlela eluhlaza egangathiweyo ubude beTownsend yokuhamba okanye ukukhwela ibhayisekile. I-Townsend inevenkile yegrosari ye-IGA, iindawo zokutyela ezininzi kunye neevenkile ezizodwa. Ehlotyeni abathengisi abaninzi banikezela ngerenti yetyhubhu kuMlambo omncinci kunye nenkonzo yeshuttle yosuku ukuya kwindawo yokuqalisa iityhubhu kunye nokuthatha amanqaku. Ukudlala kunye nokuqubha eLittle River kuyafumaneka kwiindawo ezimbalwa zokufikelela kuluntu kunye neendawo ezininzi kwiGreat Smoky Mountain National Park.
Siyathandana nezilwanyana. Zonke izinja ezityelelayo kufuneka zifakwe kwisicelo sokuqala sokurenta. Umrhumo wesilwanyana ubizwa F0R INJA NGANYE ebandakanya umrhumo wesiseko se-$25 kunye ne-$5 ngosuku. I-Airbnb ayifuni intlawulo ethile yezilwanyana ngoko oku kufanele kuhlawulwe ngokwahlukeneyo ngentlawulo eyongezelelweyo nge-AIRBNB okanye ngetshekhi. Lo mrhumo wesilwanyana sasekhaya usebenza kwabo babhukishayo emva komhla we-13 kaJulayi, 2021. Kukho umnyango wesilo-qabane wokuhlalisa inja encinane. Izinyuko eziphezulu zeveranda zinokuvaleka ukugcina inja kwinqanaba eliphambili leveranda ukuba ufuna ukushiya inja kwiveranda ngelixa uhambe. (Musa ukushiya inja engafakwanga kwi-cabin yodwa). ASIZAmkeli izinja ezingaqeqeshwanga ezenza ishishini lazo endlwini kunye/okanye zonakalise ikhabhathi kunye nefenitshala okanye zishiye iidipozithi zeenwele ezigqithisileyo. Ukonakaliswa kwendlwana kunye/okanye nefenitshala noboya benja obushiyekileyo obugqithisileyo kuya kufuna ibango elongezelelweyo lomonakalo nge-AIRBNB.
Ikhabhinethi irustic kwaye iphezu kwamanzi aneayini kwaye inokubangela itinti emdaka ebhafini nakwizinki. Akukho mcimbi wokusetyenziswa kwamanzi ngaphandle kokusela (anencasa yentsimbi) kunye nokungcoliswa okunokwenzeka xa uhlamba impahla. Ndicebisa ukuba uze namanzi okusela ukuba uwasebenzise kuba asiwaboneleli. Kukho i-propane grill oyisebenzisayo.
4.71 out of 5 stars from 220 reviews
4.71 · Izimvo eziyi-220
Ikhabhini ikwindlela efileyo -- inamagumbi amathathu ngaphezulu phakathi kweNdlu yeZilwanyana kunye nesiphelo; oku kuthetha ukuba i-traffic incinci kakhulu. Xa amagqabi ehlobo ephumile, azikho ezinye iikhabhinethi ezisondeleyo ezibonakalayo ukusuka kwinqanaba eliphambili. I-Townsend inendlela yebhayisekile kwaye iLittle River ihamba ngayo. Kukho amashishini amaninzi eetyhubhu kunye nempahla yokuloba e-Townsend, kunye neendawo zokutyela kunye neevenkile. Misa kwiziko leeNdwendwe ngolwazi lwendawo kunye nepaki.
Umbuki zindwendwe ngu- Stanley
I am a retired engineer who loves outdoor activities. Pat and I own a cabin in Townsend TN as a second home and would like to share it when available to like-minded outdoor enthusiasts. The cabin is located in Laurel Valley, which is a gated community with a beautiful golf course located close to the entrance of the Smoky Mountain National Park. The cabin is nestled in the trees giving it a secluded feeling. I hope you will enjoy visiting my cabin and enjoying the Smokies as much as I have.
I am a retired engineer who loves outdoor activities. Pat and I own a cabin in Townsend TN as a second home and would like to share it when available to like-minded outdoor enthusi…
Sihlala eTownsend ixesha elithile kwaye sinokudibana nawe ngelixa ulapha. Siza kwenza amalungiselelo nawe kwangaphambili ukuba siceba ukudlula. Ngokusondeleyo kwixesha lokurenta, siya kubonelela ngekhowudi kwibhokisi yokutshixa isitshixo ecaleni komnyango wangaphambili. Kukwakho nendibanisela yedeadbolt kucango lwangaphambili. Ikhowudi yokudibanisa efanayo isebenza kuzo zombini izitshixo. Ucango lwangaphambili lutshixiwe nokuba sisitshixo okanye ngokufaka ikhowudi enye kwideadbolt.
Ndiyavuya ukuphendula nayiphi na imibuzo abaqeshi okanye abasenokuba ngabaqeshi abanokuba nayo malunga nendlwana okanye indawo.
Ulwazi oluphangaleleyo lwangoku olunxulumene neGreat Smoky Mountains National Park luyafumaneka kwiwebhusayithi yePaki yeSizwe nakwiziko lokwamkela iTownsend.
Sihlala eTownsend ixesha elithile kwaye sinokudibana nawe ngelixa ulapha. Siza kwenza amalungiselelo nawe kwangaphambili ukuba siceba ukudlula. Ngokusondeleyo kwixesha lokurenta, s…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Townsend